Inona no atao hoe taratra taratra ary amin'ny karatra video inona no misy azy? 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Inona no atao hoe taratra taratra ary amin'ny karatra video inona no misy azy?
Rehefa mamaky ny hevitry ny lalao video vaovao isika dia matetika no mahita ilay teny hoe Ray manadihady raha resaka sary, na dia vitsy aza ny mpampiasa mahalala izay tena izy ary nahoana no nanjary zava-dehibe tokoa ny fanombanana ny hatsaran'ny sary amin'ny lalao. . Na tara aza ny fe-potoana farany Ny fanarahan-dia ny ray dia sarotra sy sarotra hazavaina amin'ny teknolojia Na izany aza, amin'ny teny tsotra, azontsika atao ny mamintina ny asany amin'ny teny tsotra sy mora takarina, mba hahafantaran'ny mpampiasa rehetra ny antony mahatonga ny fampiasana azy amin'ny lalao ho avy dia lasa zava-dehibe tokoa.
Amin'ity toro-lalana ity dia hasehoko anao inona no fanarahana taratra ary asehonay anao koa ireo karatra video manohana azy, mba hahafahantsika mampihetsika avy hatrany an'io fampiasa io raha vantany vao manomboka ny lalao izay misy ny fampiasana ny haitao (matetika asongadinina tsara ao amin'ny hevitra na ao amin'ny takelaka aloha ny vokatra voafantina.
Torolàlana fitadiavana ray
Sarotra ny manazava ny fanarahan-dia an'i Ray, fa ny fandefasana azy dia tsy maintsy hadihadiana tanteraka hahalalana izay tombony entiny sy ny antony hanolorana azy ireo hamela azy ho mavitrika hatrany amin'ny lalao izay manohana azy (haraton'ny karatra misy antsika) Raha tsy manana karatra sary mifanentana izahay dia hampahafantarinay anao izay modely azonay vidiana mba hahitana dian-doko amin'ny lalao PC.
Inona no atao hoe fanarahana taratra?
Ray tracing dia teknolojia miasa amin'ny geometry optika hanamboarana ny lalana alehan'ny hazavana, manaraka ny tara-pahazavana amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny sehatra. Ny hazavana tena izy dia hita taratra eny amin'ny faritra rehetra ary mahatratra ny masontsika izay manazava azy ho hazavana sy loko; Amin'ny lalao video, ity lalana ity dia tsy maintsy refesina tsara amin'ny alàlan'ny algorithm, mba hamerenana ireo vokatry ny hazavana sy ny aloka amin'ny fomba tena misy azo atao; amin'izao fotoana izao ny algorithm tsara indrindra hamoronana jiro sy aloka manakaiky ny fotorealisme Mampiasà taratra taratra rehefa manome ny sary 3D.
Miaraka amin'ny fandinihana taratra mavitrika, ny aloka dia tena amin'ny antsipiriany ary ireo zavatra manazava (amin'ny hazavana rehetra) dia tena mahavariana, izay mahatonga ny sary marina sy tsara indrindra indrindra amin'ny lalao indrindra miaraka amin'ny resolutions avo lenta (4K UHD).
Ny lafiny ratsy amin'ny fanarahana taratra dia ny fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny karatra sary rehetra- Ny fiaraha-miasa amin'ny hazavana sy alokaloka tena misy dia mila GPU mahery indrindra (angamba omena puce iray natokana ho an'ny fitiliana ray fotsiny), habaka fahatsiarovana horonan-tsary ary fanjifana hery lehibe. Raha manapa-kevitra ny hampihetsika ny fitiliana ny tara-pahazavana isika, matetika dia ho latsaka anaty iray tampoka ny zava-bita ankapobeny, izay tsy maintsy ihodivirana toerana farafahakeliny alohan'ny hahitanao ny marimaritra iraisana mety.
Alaharo ny horonan-tsary misy ny fitadiavana taratra
Nahaliana antsika ve ny kalitaon'ny sary amin'ny alàlan'ny fitiliana taratra mavitrika? Raha vao haingana ny karatra horonantsarinay (farafaharatsiny 2019), dia tokony hanohana ny fitadiavana taratra tsy misy olana, zahao fotsiny ny toerana misy ny lalao nofidinao (mazàna azo atao ho entana natokana (RTX na mitovitovy) na ampandehanana amina toerana misy sary avo na avo-end). Moa ve ny karatra horonantsarinay tsy manohana ny fitiliana taratra? Azontsika atao ny manamboatra azy eo noho eo amin'ny fisafidianana iray amin'ireo kiheba etsy ambany.
Raha te hifantoka amin'ny karatra NVIDIA hanararaotra ny fitiliana ny taratra izahay dia amporisihinay ny Gigabyte GeForce RTX 3070, azo alaina amin'ny Amazon latsaky ny 1000 €.
Amin'ity karatra horonantsary ity no ahitantsika ny taranaka faharoa Core RT, puce iray natokana ho an'ny fitadiavana taratra izay manome antoka ny jiro sy ny jiro fotorealistic miaraka, ho an'ny haavo vaovao momba an'io karazana haitao io. Ankoatry ny fanatsarana manokana ny fitiliana taratra, dia mahita ihany koa ny rafitra fanamafisana nohatsaraina sy ny rafitra overclocking mandeha ho azy, izay mampiakatra ho azy ny fatran'ny GPU rehefa ilaina ny kajy computational bebe kokoa (toy ny rehefa ampandehananay ny fitiliana ny taratra).
Raha te hanararaotra ny fitiliana taratra amin'ny karatra horonantsary AMD izahay dia mamporisika anao hifantoka amin'izany SAPPHIRE NITRO + AMD Radeon RX 6800 XT OC, azo alaina amin'ny Amazon latsaky ny 2000 €.
Amin'ity karatra ity dia hahafahantsika manararaotra ny fandinihan'ny tara-pahazavana an'ny AMD, tantanana amin'ny alàlan'ny CU cores haingam-pandeha (tsy misy chip voatokana toy ny ao amin'ny NVIDIA fa misy mpanampy maro be afaka mamorona singa sary rehetra). Raha mila vahaolana mora vidy izahay, dia manasa anao hamaky ny torolalana. Ny karatra horonantsary tsara indrindra ho an'ny PC.
Manohana ny fitadiavana taratra ve ireo lalao lalao?
Hatreto aloha dia efa niresaka momba ny karatra horonan-tsary PC isika, fa raha ampifanarahintsika amin'ireo konsolin'ny efitrano fandraisam-bahiny, iza amin'ireo no mifanaraka amin'ny fanarahana taratra? Manao ahoana ny zavatra ankehitriny PS4 sy Xbox One (consoles an'ny taloha) Tsy azo tohanana ny fanarahana taratraraha mbola Manohana ny tara-pahazavana ny PS5 sy ny Xbox Series X amin'ny alàlan'ny fampiharana nomen'ny karatra AMD (satria samy mampiasa kinova novaina ny chip misy sary ao amin'ny karatra horonantsary AMD farany).
Raha te handray tombony amin'ny fitiliana taratra isika nefa tsy mila mividy gara filokana PC (na mihoatra ny € 1200 aza) raiso fotsiny ny iray amin'ireo konsolin'ny efitrano fandraisam-bahiny manaraka ary manosika ny fikirakirana sary hatramin'ny farany ambony indrindra (amin'ny lalao izay misy mpisafidy kalitao sary misy). Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny lohahevitry ny PS5, manoro hevitra anao izahay hamaky ny mpitari-dalana anay Manao ahoana ny PS5? famakafakana sy fitarihana ny Playstation vaovao.
Ny fanarahan-dia an'i Ray dia afaka mamolavola ny sary kilalao maoderina, mihoatra ny fanatsarana na fiaretana ny fananganana HDR fotsiny - satria algorithm sarotra sy mandroso, mila fotoana ny fampidirana azy amin'ny lalao rehetra, saingy hanakaiky kokoa azy isika. amin'ny tena photorealism.
Tsy manohana ny fitiliana taratra ve ny PC antsika? Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy manatanteraka fanavaozam-baovao manan-danja ankoatra ny karatra horonantsary izahay; raha te hahalala bebe kokoa dia manoro hevitra anao izahay hamaky ireo mpitari-dalana anay Fepetra takiana amin'ny hardware sy ny andinindininy amin'ny filalaovana lalao video amin'ny solosainao mi Ny PC matanjaka indrindra indrindra - Ireo fitaovana farany ilaina amin'ny hardware ankehitriny. Raha ny mifanohitra amin'izay dia te-hilalao kilalao PC amin'ny fahitalavitra izahay (fa tsy ny console), dia manolo-kevitra anao izahay hamaky lalindalina ny fianaranay. Ahoana ny fomba filalaovana lalao PC amin'ny fahitalavitra.
Ahoana ny fomba hijerena Disney + amin'ny fahitalavitra
Videogiochi streaming with Cloud Gaming di Stadia, Geforce Now, Playstation Now
Ahoana ny fomba fanaovana zavakanto pixel amin'ny PC, finday avo lenta ary takelaka
Ahoana ny fomba hanampiana karatra ao amin'ny Google Play sy Apple Store
Fampiharana Encoding tsara indrindra
Ny lalao misokatra tsara indrindra ho an'ny Android sy iPhone
Ahoana ny fifehezana ny hafainganan'ny lalao amin'ny PC
Ahoana ny fomba hanafoanana ny sensor rehetra amin'ny findainao
Ny lalao akanjo sy lamaody tsara indrindra ho an'ny Android sy iPhone
Ahoana ny fampiasana eGPU amin'ny MacBook hanatsarana ny fahombiazan'ny 3D
Ahoana ny fomba hanajanonana ny famandrihana amin'ny Android, iPhone, iPad, ary Windows 10
Solony tsara indrindra amin'ny rindranasa Google